Honeywell T9 T10 Pro xakameynta heerkulka qolka | Waxaan ka socdaa mac
Waxay u muuqataa in CES ay bixinayso alaabooyin xiiso leh sannadkan iyo sidee bay u noqon kartaa haddii kale mid ka mid ah shirkadaha soo bandhigaya qalab cusub waa Honeywell. Xaaladdan oo kale waa heerkulbeegyada cusub Honeywell T9 iyo T10 Pro, taas oo, sida aad si fiican uga akhrisan karto cinwaanka, ku dar xakamaynta heerkulka qaab shaqsi ahaaneed iyada oo la adeegsanayo habeyn iyo inay si cad ula jaan qaadayaan HomeKit.
Qalabka cusub wuxuu cabirayaa heerkulka iyo huurka qolal kasta oo aan dooneyno iyo dhammaantood laga xakameeyo Mac-dayada, qalabka leh iOS iyo Siri. Shirkaddu way sii socotaa cusbooneysiinta heerkulkaaga T6 iyo T6 R Labadan moodal ee cusub ee la soo bandhigay, iyaguna waa sida fudud ee loo isticmaali karo laakiin leh hawlo badan oo ka wanaagsan.
Hada ma aysan si rasmi ah u sheegin iswaafajinta Homekit ee ka socota Honeywell soo bandhigida kuleylka cusub ee T9 iyo T10 Pro, laakiin Afhayeen u hadlay shirkadda Apple ayaa sidaas xaqiijiyay Iswaafajinta HomeKit sidoo kale waxay imaan doontaa dhamaadka sanadkaan, markaa way ka shaqeynayaan. Waxa hubaal ah ayaa ah inay la jaan qaadi doonaan laga bilaabo marka ay suuqa ka bilaabmaan Alexa iyo Kaaliyaha Google.
Sida lagu sheegay bandhigga T9-kan waxaa si fudud u qaabeyn kara adeegsadaha Looma baahna inaad noqoto khabiir, laakiin T10 Pro waxay u baahan tahay rakibid xirfad leh sababtoo ah qoyaankeeda iyo dareemayaasha hawo-qaadashada. Sikastaba xaalku ha ahaadee, had iyo jeer waxaa lagula talinayaa xirfadle rakibayaal inuu howsha noo qabto haddii aynaan khabiiro ku ahayn goobta. Waxaan isku dayi doonaa inaan helno mid ka mid ah T9-ka markii laga bilaabo wadankeena waana arki doonaa sida rakibidu u tahay.
T9-ka oo wata dareemayaal ayaa laga heli karaa dukaamada waaweyn ee Mareykanka iyo webka HoneywellHome.com by qiimahiisu waa $ 199,99. T10 Pro waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo shirkadaha mas'uulka ka ah kuleylka iyo qaboojinta xirfadleyda leh qiime ay kula tashadaan. Dareemayaasha casriga ah ee qolalka kala duwan waxaa laga iibsan karaa xirmo labo ah $ 79,99.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » New Honeywell T9 iyo T10 Pro waxay ku darayaan xakamaynta heerkulka qolka